Development Network for Immigrants ─ မိသားစုအကြမ်းဖက်မှု သားကောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီရန်စီမံကိန်း-နိုင်ငံခြားသားကဏ္ဍ
Date : 2016/3/11
Updated : 2017/12/6 下午 04:40:00
နိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအိမ်ထောင်ဖက် မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုခံစားခဲ့လျှင် ဤနိုင်ငံသားနှင့်တန်းတူကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုခံယူနိုင်သည့်အပြင် ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအင်အားနှင့်ပေါင်းစီးပြီး အကြန်းဖက်ခံရသောနိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအိမ်ထောင်ဖက်အား ပိုမိုတောင့်တင်းသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအင်အားပေးနိုင်ရန် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအားအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့် မိသားစုအကြန်းဖက်မှုခံရသောနိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအိမ်ထောင်ဖက်အား ခိုလုံခွင့်နေရာချဝန်ဆောင်မှုနှင့် နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကာကွယ်တားဆီးရေးကို ပိုမိုခိုင်ခံ့စွာလှုံ့ဆော်ပေးပြီး ၎င်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြံုစောင့်ရှောက်ပိုမိုခိုင်မာ သက်ဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်စီမံကိန်းမာတိကာသည်အောက်ပါအတိုင်း
၁. နိုင်ငံသားသစ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြံုကာကွယ်စီမံကိန်းလုပ်ဆောင် (နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်စောင့်ရှောက်လမ်းညွှန်ရန်ပုံငွေလျှောက်တင်) မြူနီစီပယ်၊ ခရိုင် (မြို့) အစိုးရအား နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြံုကာကွယ်ပေးရန်ထောက်ပံ့ကြေးတွင် အပ်နှံထားသောလူ့အင်အား၊ ဥပဒေအရတရားစွဲဆိုမှု၊ အရေးပေါ်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် အိမ်ငြားခထောက်ပ့ံငွေစသည်တို့ပါ၀င်သည်။
၂. ၁၁၃ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထူးဖုန်းလိုင်းကို အင်္ဂလိပ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကမ်ဘောဒီးယားစသည့် နိုင်ငံခြားဘာသာစကား (၅) မျိုးဖြင့် ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည်။ ဤဖုန်းလိုင်းမှသုံးဦးအတူစကားပြောခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ၂၄ နာရီလုံး အချိန်ပြည့်ဝန်ဆောင်ပေးသည်။
ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအားအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့် မိသားစုအကြန်းဖက်မှုခံရသောနိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအိမ်ထောင်ဖက်အား ခိုလုံခွင့်နေရာချဝန်ဆောင်မှုသည် တိုးချဲ့နေရာချထားခြင်း၊ ဘာသာ(စကား)ပြန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် နေရပ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်လေယာဉ်လက်မှတ်စသည့်အချက်အလက်ထောက်ပံ့မှုတို့ပါ၀င်သည်။